I-Sundowns ifuna ukubuyela ezindleleni zayo zokunqoba | Scrolla Izindaba
I-Sundowns ifuna ukubuyela ezindleleni zayo zokunqoba
Ngemuva kokudlala ngokulingana emidlalweni yabo emibili yokugcina, i-Mamelodi Sundowns izobe ikulangazelele ukubuyela ezindleleni zokuwina nokuqhubeka nokukhulisa igebhe phezulu kwi-DStv Premiership.
Ngaphambi kwekhefu le-FIFA emasontweni amabili edlule, i-Sundowns ishaqwe i-Black Leopards esezansi kwi-log ebabambe ngamagoli amabili kwamabili.
NgoLwesihlanu, kwi-CAF Champions League badlale ngokulingana okungenamagoli i-CR Belouizdad e-Algeria, belahla amaphuzu ku-Group B okokuqala ngqa.
NgoLwesibili ntambama, bazobhekene nelinye iqembu i-Tshakhuma Tsha Madzivhandila e-Peter Mokaba Stadium, ePolokwane ngo-3 ntambama.
I-Downs kulindeleke ukuthi inyathele ngokucophelela emdlalweni wayo ne-Tshakhuma. Iqembu lase-Polokwane lisendaweni ebekelwe izembe futhi lizolwa ngakho konke elinakho ukugwema ukwehla.
Umqeqeshi uManqoba Mngqithi nenkampani bazothemba ukuthi umgadli wabo osefomini uPeter Shalulile ugqoke amabhuzu akhe okushaya amagoli nokuyinto emenze washaya amagoli ayisishiyagalolunye kule sizini.
Khonamanjalo, e-Naturena umoya uphakeme ngemuva kokuthi Amakhosi eshaye amagoli amabili.
Ishaye i-Orlando Pirates ngegoli elilodwa eqandeni e-FNB Stadium ngaphambi kwekhefu le-FIFA kwathi ngoMgqibelo yanqoba iqembu lase-Morocco i-Wydad Casablanca ku-Champions League ngegoli elilodwa eqandeni. NgoLwesibili bazokwamukela i-Stellenbosch endaweni efanayo ngo-5 ntambama.
Abadlali baphambili uSamir Nurkovic noBernard Parker yibona abashaye amagoli kule midlalo kanti i-Chiefs izobabheka ukuthi baphinde bawenze lo msebenzi.
I-Stellies izobe ibheke ukugwema ukuhudulelwa emzabalazweni wokubuyela ezikhundleni.